Chitatu, July 8, 2009 Svondo, Kukadzi 9, 2014 Douglas Karr
Tsanangudzo yehunyanzvi ndeiyi:
iko kushandiswa kwesainzi kune zvekutengeserana kana indasitiri
Nguva yadarika, ndakabvunza, "Kana rako IT department raiuraya hunyanzvi“. Wakave mubvunzo wakabvunza mhinduro chaiyo! Mazhinji madhipatimendi eIT anokwanisa kudzora kana kugonesa hunyanzvi… madhipatimendi eIT anogona kutadzisa kana kugonesa kugadzirwa nekutengesa?
Nhasi, ndave nemufaro wekusangana naChris kubva Kuwedzera. Yakanga iri hurukuro yemweya uye isu takakuvara tichienda ingangoita maminetsi makumi mana nemashanu apfuura kwataida.
One of the interesting pieces of the conversation was discussing who owned the decision to purchase a platform or SEO services. We both sighed when that decision fell into the hands of an IT representative. I'm in no way trying to disparage IT professionals – I rely on their expertise on a daily basis. Kubhuroka kweSEO izano rekutsvaga rinotungamira… a kushambadzira mutoro.
In selecting us as their corporate blogging platform, it's often the IT department that believes that they can implement a vakasununguka mhinduro ye blogging. A blog iri blog, handiti?
Usamborega that the content isn't optimized
Usamborega that the platform isn't secure, stable, maintenance-free, redundant, etc.
Usamborega that the platform isn't scalable to millions of pageviews and tens of thousands of users.
Usamborega kuti iyo kambani yakaivaka yakashandisa mazana ezviuru zvemadhora mukutsvaga uye kusimudzira kuverengera maitiro akanakisa uye kuteedzera injini yekutsvaga kwakabatanidzwa.
Usamborega iyo inongedzo yemushandisi iri nyore kuti chero munhu ashandise, pasina chero chinodiwa chekudzidziswa kwakasimba.
Usamborega iyo system inoitwa otomatiki saka hapana ruzivo rwekumaka uye kupatsanura runodiwa.
Usamborega that our staff monitors our clients' progress to ensure their success.
Usamborega kuti chikuva chinouya nekuenderera mberi kwekudzidzisa kubatsira mabloggi kuvandudza hunyanzvi hwavo uye kuwedzera kudzoka kwavo mukudyara nekufamba kwenguva.
With SEO, it's often the same argument. I've even been on the opposite side of the SEO argument, telling you that you don't need an SEO expert. Jeremy akandiyeuchidza nezve ino positi… doh!
Pfungwa yangu yaive yekuti makambani akawandisa haana NO yekutsvagisa injini uye arikushayikwa pane yakawanda yakakosha traffic. Dai vakangoita iyo pasipasi, vangangoisa saiti yakanaka ivo yavakashandisa $ 10k pamberi pevashanyi vashoma. Iyi posvo yakanyorerwa ruzhinji rwemakambani asina makwikwi uye asina kugadziridza… chaive chikumbiro chekuti aite zvishoma.
Jul 10, 2009 pa 2: 21 AM
Pane nyika yemusiyano pakati peku blogga chikwiriro uye SEO nzira.
Iyo blogging chikuva ingori musanganiswa we software uye Hardware, uye IT madhipatimendi akanaka kugona kuisa iwo pamwechete. Kune zvakare vatengesi vazhinji vanoita basa iri, kungave nekuti vane software yekudyara, kana nekuti vatove nazvo kana kuhaya Hardware, kana nekuti vane hunyanzvi hwakawanda mukuchengetedza iyi chaiyo IT stack. Mubvunzo wekuti iwe unokamura sei manejimendi epuratifomu yako yekubhuroka pakati pevanhu-vepamba uye vanhu vakaburitswa kunze ndeyechokwadi "kutenga / kuvaka / kukwereta" dambudziko reIT.
Sangano reSEO, zvakadaro, rinenge rakazvimiririra pane rako blogging chikuva. Unogona kuve nehukuru kana kuti inotyisa SEO zvisinei nepuratifomu. Asi kushandisa SEO kambani iri kwete sekushandisa yechitatu-bato IT kambani. Zvakafanana nekuhaya vanyori vanokwanisa kududzira pfungwa dzako mumutauro weGoogle.
Chokwadi, unogona kushandisa yemahara, yakavhurwa sosi blogging software. Uye ngatitaurirane, Doug-WordPress inomhanya pane yakachengeteka, yakagadzikana, ine zvigadziriswe zvakanyanya. Vashandisi veWordPress vanosanganisira iyo Dow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News uye CNN - zvese izvi zvinopfuudza yako "mamirioni ekuona peji, makumi ezviuru zvevashandisi" bvunzo. Automattic (vanhu vanoita WordPress) vane makumi emamirioni mu mari yekushandira, iyo ini yandinofunga inoumba tsvarakadenga yakakura yekutsvagisa neinjiniya bhajeti. WordPress haisi yekutamba.
Nekudaro, WordPress ingori chikuva cheku blogga. Chaizvoizvo, zviri chete hafu chikuva chekublogi- iyo yakavhurika-sosi WordPress software (kunyange paine zvisingaverengeke WordPress kuitisa masevhisi, kusanganisira WordPress.com.) Kana iwe uchifarira chero dhigirii rekuvimbika kana scalability, unofanirwa kuisa mari mune inoenderana Hardware uye hunyanzvi.
Nekudaro, iro IT department nderechokwadi kuti blog ingori blog uye ivo vanogona kushandisa emahara maturusi ekuti iyo blog chikamu iende. Asi rakawanda rebasa uye hwakawanda hwekukosha kukosha hausi mune software. Inenge poindi yese yekuve neblog inoitwa inogoneka kuburikidza neyakajeka uye inoenderera SEO zano. Uye kana iwe uchinge waziva kuti ndizvo zvaunoda, chimwe chinhu chaunofanirwa kunge uchigadzirira kubhadhara.
Dambudziko iri kuita kuti madhipatimendi eIT azive kuti yakanaka SEO haisi diki remapenzi, kuti zvakaoma, kuti zvinogara zvichichinja, uye zvinoita mutsauko wese pasi.
Jul 10, 2009 pa 2: 52 AM
Handina chokwadi chekuti urikubvumirana kana kupokana neni. Iwe neni tinoziva kuti Dow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News uye CNN havasi kumhanya neWordPress 'sezvazviri'. Vari kuimhanyisa pasina imwe yekuwedzera mitengo yezvivakwa, mutengo wekusimudzira theme, yekutsvaga injini yekumisikidza mutengo, nezvimwe? Iwe haufunge kuti vari kushandisa mari kudzidzisa vashandi vavo pakushandisa iwo mapuratifomu? Kana kusimudzira kupfuudza zvemukati kune iwo mapuratifomu? Zvirokwazvo ivo vari! Imwe yeaya mabhizinesi akaisa mari yakati wandei kuti aite 'yemahara' chikuva kuvashandira.
Iyo blog ingori blog, asi blogging chikuva HASI ingori blogging chikuva. Izwi rakakosha simba remamita, otomatiki ekumaka, mapoka uye kuisirwa zvemukati muCompendium misiyano mikuru. Zvinoda kuti mushandisi apedze nguva shoma achinetseka nezve 'mablog', 'sei' kugadzirisa zvirimo, uye yakawanda nguva kunetseka nezve 'chii' kublogi. Mabhizimusi mabloggi anofanirwa kuve anotarisisa pane yavo meseji - kwete yavo chikuva.
Ini ndinokuvimbisa iwe kuti chero munhu anogona kuvhura Compendium uye intuitively kutumira uye iyo posvo ichagadziriswa. Izvi handizvo zvinoitika neWordPress. Ruzhinji rwevanhu avo ini pachedu ndakadzidzisa mabhurogu zvinobudirira neWordPress vanga vasina zano rekuti vange vachishaikwa zvakadii neese post
Zvekare, izvo zvinotarisirwa nedhipatimendi reIT hazviwanzo kutarisa bhizinesi. Ndakagara ndichifarira vezera rangu veIT 'vachiongorora' yangu software yekutenga kuona kuti handisi kuisa kambani panjodzi; zvisinei, ivo havazombofa vakakwanisa kuona mabhenefiti epuratifomu kana zano uye kukanganisa kwaro pane bhizinesi. Izvo hazvisi izvo izvo zvavakadzidziswa, izvo ruzivo rwavo rwuri, kana izvo zvavanofanirwa kushandisirwa.
Rega vanhu vebhizinesi vatore zvisarudzo zvebhizinesi! Regai IT ive vabatsiri vavo vakavimbika.
Jul 10, 2009 pa 4: 32 AM
Ini handisi kubvumirana kana kupokana nepfungwa yako izere, ndiri kungojekesa zvaunotaura.
Hapana munhu akataura kuti vashandisi vakakura veWordPress vari kumhanyisa iyo software pasina yekuwedzera maitiro uye mutengo wezvivakwa. Wati "nevermind kuti chikuva hachikwanisike kumamirioni ekuonekwa kwemapeji uye makumi ezviuru evashandisi", asi icho hachisi chokwadi. Zviri pachena kuti zvinogona kukwirisa WordPress (kana Blogger, kana Drupal kana DotNetNuke kana Compendium zvichingodaro) kusvika padanho iri, asi iwe unofanirwa kuisa mari muhurdware, inotsigira software uye hunyanzvi hwehunyanzvi. Mubvunzo hausi kana iri zvinogoneka, zviri kana iwe uchida kuzviita iwe pachako kana kana iwe uchida kuti mumwe munhu azviitire iwe.
Ehe, chikuva chekublogi chingori chikuva cheku blogga. Iko kusanganiswa kwesoftware uye Hardware inogadzira blog. Chokwadi, mamwe ane akasiyana maficha, uye iwo maficha anogona kuve neanokosha uye anokosha mari yakawanda. Kunyangwe iwe uine IndyCar, yakazara-yakatarwa BMW kana yakavimbika rori, iwe une mota yemotokari iyo inogona kutyairwa kubva kunongedza kuenda kuA kusvika kunongedza B. Ichokwadi here kuti dzimwe dzedzimotokari idzo dzakakodzera zvirinani kune mamwe mabasa? Ndizvozvo. Mubvunzo ndewokuti: ibasa ripi rauri kuyedza kuwana?
Ndine chokwadi chekuti kana iwe ukaisa mushandisi padivi-padivi neCompendium uye chero yakavhurika-sosi blogging chikuva, iyo posvo pane yeCompendium blog yaizotyaira traffic yakawanda - kunyangwe dai iwo machira aive izwi-re-izwi rakafanana. Iko kukosha kukuru kukambani yako! Kana iyi kesi yekushandisa iri inomiririra, inogadzirira inonakidza nzvimbo yekutengesa yeCB.
Asi ngationgororei sei iyo chete posvo yaizowana yakawanda traffic. Icho chikonzero chiri kunyanya nekuti Compendium iyo kambani ine inoenderera nzira yekushanda. Iwe uri kuvandudza iyo codebase nguva dzese. Iwe urikubatanidza kune vatengi vatengi kuti uvabatsire kuvaka mukurumbira. Iwe unosangana nevatengi uye unopa yekuwedzera dzidziso uye zviwanikwa. Unochengetedza zvivakwa zvakavimbika kwazvo. Zvakawanda, kana zvisiri zvakawanda zvekubatsira kweCompendium pamusoro pechishandiso chemahara ishumiro inoenderera mberi uye rutsigiro iwe rwaunopa kune yako software, vatengi vako, uye nezviri mukati.
Uye zvakare, iwo mukana wakanaka uye vazhinji vevatengi vako vanofara kwazvo. Asi haisi chikamu chakakosha che software yako uye Hardware "blogging chikuva." Iwe unogona kuwana mhedzisiro imwechete nekushandisa akasiyana software (asi ringave riri basa rakawanda!) Izvi zviri kuita zvinoita semakambani DK New Media ita mazuva ese. Chero ani anobatanidzwa mukuita sarudzo yemakambani blogging anodikanwa kuti anzwisise aya ma nuances.
Nyaya yakakosha apa ndipo panoperera basa remumwe dhipatimendi uye mumwe anotanga. Iko hakuna mhinduro dziri nyore kumubvunzo iwoyo. Zvakatonyanya, kana chero chikamu chemutsara uyu chikayambuka kunze kwekambani kuenda kune wechitatu mutengesi, panotanga kuve nenzvimbo dzisina kujeka pakati pezvinhu uye zvinova zvakaoma kuongorora njodzi nezvakanaka. Unodzivirira sei nzvimbo yako kana vanhu vekunze vawana mukana? Kana, kubva kudivi rekushambadzira: une chokwadi sei kuti wekunze mupuratifomu mupi haasi kuzokwenya kumusoro nekuparadza zita rako? Njodzi idzi dzinogona kuve diki kana hombe, asi hadzisi zero.
Ndine chokwadi chekuti sarudzo dzakawanda maringe netekinoroji dzinoitwa neIT pasina kuremekedza zvakakwana kune zvine chekuita nebhizinesi. Asi dambudziko rinofamba munzira dzese-vanhu vebhizinesi vanofanirwa kunzwisisa zvakawanda nezveIT uye zvinopesana. Kushanda pamwe chete panzvimbo pokupesana kunobatsira munhu wese.
Jul 10, 2009 pa 4: 48 AM
Kutenda iko kujekeswa, Robby! Ini ndichamira nekupedzisira makomendi. Ndinovimba zvangu IT zviwanikwa kuti zvive vanachipangamazano vangu saka ini handiite chimwe chinhu benzi. Nekudaro, ini handivape sarudzo yekupedzisira pamapuratifomu uye mazano ari mune yakanakisa yekufambisa bhizinesi kumberi. Isu mumwe nemumwe tine masimba edu uye ivo vanofanirwa kubvisirwa zvakakodzera.